Madaxweynaha Somaliland oo Dardaaran Qiiro leh oo Waddaniyadeed ku Gunaanaday Shirkii Wada-tashiga Golihiisa Wasiirrada – WARSOOR
Hargeysa – (warsoor) – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa galabta soo gabogabeeyey shirkii wada-tashiga Golaha Wasiirrada cusub uga socday afartii maalmood ee la soo dhaafay Huteelka Royal Palace Hotel, oo ku yaalla galbeedka Hargeysa.
Madaxweynaha oo ka hadlay xidhitaanka kulankan ayaa yidhi “Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa golaha wasiirrada iyo Madaxweyne ku-xigeenkaba hawshan qaran ee aad qabateen afartii cisho ee loo dhigi karo rag meel lagu xidhay, oo is yidhi ha soo bixina illaa aad talo keentaan oo aad wax soo saartaan, waana xeer iska jiray Soomaalidii iyo dadkoo dhanba hadday wax xukumayaan oo ay dad u garqaadayaan iyo hadday tallo adag xalilayaanba caalamkoo dhan waa la go’doomiyaa cidda la doonayo inay maskaxda shiilaan, oo in aan dadka maskaxdooda la soo faro-gelin oo waxa kale soo jeedsan ayaa iska dhaqan ah adduunka oo dhanba qoloba af ay u bixisaba.
Madaxweynuhu wuxuu u soo jeediyay wasaaradaha inay ku dhaqmaan inay wax isla gorfeeyaan inta aanay hawsha ay qabanayaan bilaabin, waxaannu yidhi; “Waxaan jecelahay inay bilow inoo noqoto in wasaarad waliba gudaheeda intaa in leeg marka ay wax qabanayso kolka hore intaanay faraha la gelin ay tashato, in sharciyada lagu shaqaynayo la eego habka loo qabanayo in laga heshiiyo dabadeedna wadar loo dhaqaaqo, waayo, waayo-arag badan baa ina tusaya dadka haddaanay marka hore sida wax loo qabanayo, aragtida iyo sharciga lagu shaqaynayo haddaan laga heshiin muran badan iyo kala cabashaa yimaada.
“Maanta (shalay) Baashe guddoomiyaha wakiillada ayaanu kulanay wuxuu yidhi ‘miyaanu raggii ciddi kasoo noqon?’ Waxaan ku idhi ‘iyagaaba jeclaystay oo ciddi kama soo noqon, wuxuu yidhi ‘dee waan sahan tegayaaye meesha ay tageenna waa meel fiicanoo waa ay iska nasanayaane, ma iyagoo qudhaa la xanaanaynayaa ragga kale miyaan la eegayn”. “kaalay ila soo arag baan idhi raggu wuxuu hayo,”ayuu yidhi Madaxweyne Muuse Biixi.
Markaa wuu iga aqbalay toosna wuu u yimmi, saddex cisho markuu joogayna wuxuu soo galay hawsha. markaa aad baan ugu mahadnaqayaa si gaara waayo raggii la da’ada ahaa ka ugu cudur daar yari wuxuu igu yidhi “waar ninyow dhakhtarkaas baanan ka maarmayn, markaa aad baan odayaasha ugu mahadnaqayaa.”
Madaxweynaha Somaliland wuxuu ugu baaqay wasiirradiisa in macluumaadkii ay ka korodhsadeen kulankaas ay hirgeliyaan; “Hadalku wuxuu ku koobnaanayaa maanta hawshaa aynu qabanay inaynu hirgelino, malaa aniguba waan u baahan nahay waxan laydin baray maanta ee odayaashii waa weynaa Yaasiin oo kale uu leeyahay wax cusub baa nala baray sida laysu taago, waxay ila tahay anigana yaanan goordhow isku qaldamine anigana ha laygu daro.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi; “Waxaan is dul taagayaa qoddobka ah inaynu ku noqono midnimada iyo wada tashiga ilaa heerka hoose ee waaxda hoose ah, aad iyo aad baan idiinku mahadnaqayaa dhammaantiin, machadka shaqaalahana waan u mahadnaqayaa, Guuleed Hagoog, waxa machadkaasi uu hayaa cilmi badan, qiimo bandanna wuu inoogu fadhiyaa. waxaan u mahadnaqayaa qolada garsoorka ee caddaaladda ka shaqaysa looyarro ama garyaqaanka guud oo anigu intii imika aan toddobaadkan la shaqaynayey aan aad ugu mahadnaqayo, waayo waxaad moodaa wixii shuruuc dalka yaalay in la diyaariyey oo xeer nidaamiyihii dawladda la diyaariyey oo aad is odhanayso haddii waxanba la diyaariyey muxuu marwalba u yimaadaa khilaafka iyo is afgaran waagu, ma dadkaan waxba akhriyeyn miyaanay gaadhin?